ကလေးများ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှုအပေါ်ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများ - YOYARLAY Digital Media and News
Published: December 22, 20177:46 am Updated: February 8, 201911:17 am
ယနေ့ခေတ်တွင် ကလေးများသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်ကိရိယာများဖြင့် ဆော့ကစားလာကြပါသည်။ ၎င်းကိရိယာများတွင် ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ တီဗီ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ဖုန်း apps များ၊ ကွန်ပြူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့် PSP ဂိမ်းများပါဝင်ကြပါသည်။ အချို့သော လျှပ်စစ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကလေးလူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မိဘများကလည်းကလေးငယ်များတစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာကြာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေစေရန်အတွက် ၎င်းပစ္စည်းများကိုအသုံးချတတ်ကြပါသည်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်ကိရိယာသည် အသုံးဝင်နိုင်သလိုအလွန်အကျွံ အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများလည်းရှိတတ်ပါသည်။ ကွန်ပြူတာသို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းစက်ကိရိယာအားကလေးငယ်အားအသုံးပြုစေခြင်း၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
• ကျောင်းမတက်သေးခင်အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် အသိအာရုံနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများရှင်သန်တက်ကြွလာစေရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။အချို့သောကိရိယာများသည် နားထောင်မှုစွမ်းရည်၊ အသံများနှင့် စကားသံများအားသင်ကြားခြင်းကိုတိုးမြင့်စေရန် အထောက်အကူပြုရာတွင် အသုံးပြုပေးနိုင်သည်။
• လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဂိမ်းများသည် အသိအမြင် သင်ကြားရေးနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု စွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအားတိုက်တွန်းအားပေးနိုင်ပါသည်။တီထွင်ကြံဆမှု စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ စူးစမ်းလေ့လာခြင်းစွမ်းရည်များနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကိုလည်းအထောက်အကူပေးနိုင်ပါသည်။
• ကွန်ပြူတာအသုံးပြုခြင်းသည် လက်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးကွန်ပြူတာကိုတတ်မြောက်စေပါသည်။
• ဂိမ်းများအား ကျွမ်းကျင်ဆော့ကစားနိုင်ခြင်းသည် ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးပြီးမျက်လုံးနှင့် လက်တို့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါသည်။
• အဆင့်တက်စေပြီးအမှတ်များရှာရန် ကစားသမားများအားတိုက်တွန်းသောဂိမ်းများသည် သင်္ချာစွမ်းရည်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန် လှုံ့ဆော်မှုကိုပေးပါသည်။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ
• ကလေးများသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာကိုတစ်ရက်လျှင် ၇နာရီထက် ပိုမိုအသုံးပြုတတ်ကြပါသည်။ ထိုအခါ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ကြသော်လည်းဖိနပ်ကြိုးချည်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းစသောကိစ္စရပ်များတွင် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိဘဲအားနည်းလာတတ်ကြပါသည်။
• မိသားစုသူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့်အတူအိမ်ပြင်ပလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကလေးငယ်များအချိန်ကုန်ဆုံးစေရန် အရေးကြီးပါသည်။
• ကလေးငယ်များသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် ဂိမ်းကစားနည်းများအားအချိန်ကြာကြာကစားသည့်အခါ ကလေးငယ်များ၏စိတ်သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုတိမ်းညွှတ်စေတတ်ပါသည်။
• စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အချိန်များကုန်ဆုံးတတ်သောကလေးငယ်များသည် စာပေလေ့လာမှု အပေါ် အာရုံစိုက်မှု အားနည်းတတ်ပါသည်။
• ကွန်ပြူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများလွန်ကဲစွာအသုံးပြုခြင်းသည် စွဲစေတတ်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ ကြာရှည်ထိုင်လုပ်ရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းလာခြင်း၊ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းလာခြင်းနှင့် အစာစားခြင်းအလေ့အထညံ့ဖျင်းလာခြင်းတို့ကိုဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်၏ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုစီမံမလဲ? ကလေးငယ်ကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာမသုံးအောင် လုံးဝဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းမျိုးမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆိုးကျိုးတွေ လျော့နည်းလာစေဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။
1. ကလေးအသုံးပြုချင်တဲ့ ဂိမ်းရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကလေးကြည့်ချင်တဲ့ တီဗီအစီအစဉ်တွေကိုသိပါစေ။
2. ကလေးငယ်ရဲ့အိပ်ခန်းအတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအားဆင်ပေးခြင်း၊ ထားရှိပေးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။
3. စည်းမျဉ်းများထားရှိပါ။ ဥပမာ – ဂိမ်းများဆော့ခြင်း၊ တီဗီ ကြည့်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအသုံးပြုခြင်းအားအချိန်ကန့်သတ်ချက်ထားပါ။
4. သင့်ကလေးငယ်၏ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းတို့အားစောင့်ကြည့်ပါ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ တီဗီအစီအစဉ်များနှင့် ရုပ်ရှင်များတွင် ကလေးများ ကြည့်ရှုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုပြုပါ။ ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများမည်သို့ ခံစားနားလည်သည်ကိုမေးမြန်းပြီးဆွေးနွေးပါ။
Ref : Knowledge : Positive and Negative Impacts of Electronic Devices on Children
Previous Previous post: ပါးဖောင်းဖောင်းလေးရအောင် ပြုလုပ်နည်း
Next Next post: M-ပိုက်ဆံအကြောင်း သိကောင်းစရာအချို့နဲ့ ရင်ခုန်စရာအထူးအစီအစဉ်များ
အနားယူခြင်းက ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာလို၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာ စားသောက်နေထိုင်တာတွေလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အနားယူတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနားယူခြင်းလို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတင်မကဘဲ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ အနားယူခြင်းအမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကုထုံးဆရာမနဲ့အကြံပေးဆရာမ တက်ရှာ…
ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေစုမိတိုင်း မောင်နှမတွေစုမိတိုင်း ဗာဒံပင်တွေအောက်မှာ ဗာဒံသီးတွေကောက်လို့ တူတွေ၊ အုတ်ခဲတွေသုံးလို့ ထုပြီး အထဲကအဆန်ကို အရသာရှိရှိစားခဲ့ဖူးတယ်ဟုတ်။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ စားရတာ တော်တော်လေး အရသာရှိပါတယ်။ ဗာဒံသီးကအရည်တွေစဉ်ရင် အဝတ်အစားတွေ ပေမှာစိုးလို့ဆိုပြီး စိုးရိမ်လိုက်ရတာလည်း အမောနော်။ ကလေးတုန်းက…
Published: February 28, 20201:11 pm
တချို့အတွက်က တကယ်ချစ်တဲ့ယောကျာ်းလေးဆိုတာ ပန်းစည်းအကြီးကြီးနဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေယူလာပေးပြီး ရိုတတ်တဲ့သူလို့ ထင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမပေးပြန်တော့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို တကယ်မချစ်ဘူးလို့ထင်လာတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ တကယ်ချစ်မချစ်ဆိုတာ ဈေးကြီးတန်ပစ္စည်းတွေပေးတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျ်ားလေးဆိုတာ သင့်ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောရင်တောင် အပြုအမူတွေနဲ့ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကို…
Published: December 24, 20194:21 pm